Nduzi maka Onye na-eme njem nleta Odisha | Kpọọ 91-993.702.7574
Ịga n'ihu na Akara Ị Pụrụ Ịtụkwasị Obi! ... Gaa na Ụdị i nwere ike ịtụkwasị obi. Akpụkpọ ụkwụ Sand Peeji N Njem bụ nke kacha mma Tour Operators Odisha. Mee ka ndị ọrụ ọrụ anyị na ndị ọkachamara mee njem nleta na Odisha bụ ahụmahụ kachasị echefu echefu. Anyị na-emepụta ncheta ndị na-adịgide adịgide ruo mgbe ebighị ebi The effervescent Tour Operator Odisha nke na emetụ mkpụrụ obi nke ọtụtụ ndị ahịa na nchịkọta mara mma na ọrụ mgbakwunye. Chọta ndị ọhụrụ, ekpomeekpo, ụdị ndụ dịgasị iche iche ma gaa na ụwa nke ị na-amabeghị na ya na onye nlegharị njem kacha mma na-eme njem. Ị ga-enwe mmetụta dị ka mpaghara n'ógbè ọ bụla ị na-aga na Sand Pebbles Tours N Travel. Nweta akpụkpọ ụkwụ njem gị ma dịrị njikere ịnweta ihe kasị mma Odisha na Tour Operator Odisha.
Ọrụ anyị gụnyere
Car & Onye nlekọta na-ere maka njegharị na agbamakwụkwọ: Ụgbọala na ndị nleta maka njem nleta na ọkara maka ịgagharị obodo, akara ala, omenala na ihe ndị ọzọ. Ụgbọ ala ụgbọ ala na ndị ọkwọ ụgbọ ala dịkwa maka Wedding na Barats.
Nlegharị anya nlegharị anya: Bịaruo nso n'àgwà ma nọrọ oge na flora na ógbè.
Na-abanye n'ime obodo & International: Chọta ihe mere ị ga-eji gaa ezumike ezumike gị site na ntanetị nke ụlọ na njem nleta ụwa gaa ebe kachasị ewu ewu na India na gburugburu ụwa.
Domestic & International Flighting booking: Otu ìgwè nke ndị nlegharị njem nlegharị anya nke ukwuu Odisha na-ewetara gị ọnụahịa kachasị mma na ụgbọ elu ụgbọ elu ụwa. Anyị na-enyekwa enyemaka Passport & Visa maka enyemaka.
Nchịkọta Ihe: Ndị ọrụ nwere nkà iji hazie Mgbakọ, Nzukọ Nlekọta Cell, Ntinye, Ngosipụta na Ihe Ndị Na-eme site na nkwụsị na n'ụzọ dị irè.
Anyị bụ onye nlekọta njem nlekọta nke ASICON-2007, IATO-2008, CII-2008, IPL-2008, IRACON-2008 na All India Judges Conference - 2010 Rourkela, Hotel Hindustan International Bhubaneswar na Hotel Mayfair Palm Beach Resorts, Gopalpur na oké osimiri . A na-achọ ya na ntinye aka na India njem, IATA, ATOAI, TAAI, IATO, ADTOI na ITTA.
Kpọtụrụ anyị / nyocha anyị